Maxay Ganacsi kasta oo ECommerce ahi ugu Baahan Tahay Qalab Qiimeyn Dynamic ah? | Martech Zone
Dhamaanteen waan ognahay in ku guuleysiga xilligan cusub ee ganacsiga dhijitaalka ah ay kuxirantahay qodobo kala duwan, sidaa darteed hirgalinta qalabka saxda ah waa mid muhiim ah.
Qiimuhu wuxuu kusii socdaa inuu ahaado xaalad qaboojiye ah marka la gaarayo go'aanka iibsiga. Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee soo food saara ganacsiyada eCommerce maalmahan ayaa la jaanqaadaya siciradooda si ay ula jaan qaadaan waxa ay macaamiishoodu raadinayaan wakhti kasta. Tani waxay ka dhigaysaa qalab qiimeyn firfircoon oo muhiim u ah dukaamada internetka.
Istaraatijiyadaha qiimaha ee dhaqdhaqaaqa, marka lagu daro inay tahay hab wax ku ool ah oo lagu ilaaliyo joogitaanka tartanka ee suuqa, waxay naga caawineysaa inaan abuurno xiisaha macaamiisha. Taasi waa sababta ay hadda muhiim ugu tahay ganacsi kasta oo ka mid ah eCommerce inuu yeesho qalab qiimeyn firfircoon leh oo loogu talagalay istiraatiijiyaddiisa qiimeynta ugu habboon.
Ragga waaweyn ee ganacsiga qadka toos u isticmaala ayaa tikniyoolajiyadda noocan ah horay u isticmaalaya. Waxaad ku arki kartaa tan Amazon, taas oo beddeli karta qiimaha alaabteeda boqolaal jeer maalintii. Algorithm-ka ay adeegsato Amazon ayaa weli qarsoodi u ah dukaamada tafaariiqleyda ah ee isku dayaya inay raacaan u janjeera shirkaddan weyn ee internetka.
Isbedelka qiimaha Amazon wuxuu badanaa saameeyaa alaabada tikniyoolajiyadda. Thanks to dagaalka qiimaha joogtada ah, qaybtani waa mid ka mid ah kuwa ugu isbedelka badan. Si kastaba ha noqotee, isbeddelada qiimaha ayaa ku dhaca dhammaan noocyada alaabooyinka ay bixiso shirkadda Amazon.
Maxay yihiin faa'iidooyinka yeelashada istiraatiijiyad qiimeyn firfircoon?
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad xakameyso farqiga faa iidada ee alaab kasta marwalba si aad u ilaaliso tartanka suuqa.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka faa'iideysato fursadaha suuqa. Haddii tartanku gabaabsi yahay, baahidu way badan tahay oo sahaydu way ka hooseysaa. Tani waxay ka dhigan tahay inaad dejin kartid sicirro sare, taas oo kordhin doonta faa'iidooyinkaaga.
Waxay kaa caawineysaa inaad sii ahaato mid tartamaya isla markaana u tartama si isku mid ah Hal tusaale oo cad waa Amazon, taas oo, tan iyo bilowgii, qaadatay istaraatiijiyaddeeda qiimeynta firfircoon ee ugu sarreysa, taas oo fure u ahayd murankeeda. Hadda waxaad la socon kartaa qiimaha Amazon oo aad go'aamin kartaa waxa istiraatiijiyadaada qiimeynta ay noqon doonto.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad boolis ka dhigto qiimahaaga, kana fogaato inaad siiso alaab qiimo jaban suuqa, taas oo siin karta sawir khaldan macaamiishaada oo ku saabsan siyaasadaada qiimeynta, kana hortageysa in loo arko inay yihiin kuwo aad qaali u ah ama aad u jaban.
Teknoolojiyad noocee ah ayaa noo oggolaaneysa inaan hirgelinno istiraatiijiyaddan?
Istaraatijiyadaha qiimaha ee dhaqdhaqaaqa ayaa u baahan qalab lagu fuliyo, softiweer ku takhasusay uruurinta xogta, ka shaqeynta, iyo fulinta falalka iyadoo laga jawaabayo dhammaan doorsoomayaasha lagu daray algorithm-ka.
Helitaanka softiweer meel lagu fuliyo laguna shaqaysiiyo hawlaha, sida falanqaynta habdhaqanka macaamiisha iyo qiimaha ganacsiyada kale ee qaybta waxay suurtogal ka dhigeysaa in la dedejiyo hannaanka go'aan gaarista oo lala socdo, lagu gaaro faa'iido weyn.
Qalabyadani waxay ku tiirsan yihiin xog weyn si ay u falanqeeyaan doorsoomayaal fara badan oo xaalada ku iibin kara waqtiga dhabta ah. Sida aaladda qiimaha firfircoon ee ka socota Ka fikir, taas oo kuu oggolaaneysa inaad go'aamiso waxa qiimaha ugu fiican ee alaabadaada iyo adeegyadu ay yihiin wakhti kasta iyada oo loo marayo falanqaynta in ka badan 20 KPIs oo leh qaab sirdoon farsamo (AI) awood badan leh. Tafaariiqle kasta wuxuu ka helayaa macluumaadka uu u baahan yahay tartankiisa iyo suuqa. AI-kani wuxuu kaloo leeyahay awood barashada mashiinka, taasoo u suurta gelinaysa go'aannadii horay loo qaatay in lagu xisaabtamo xilligan. Sidan oo kale, istiraatiijiyadda qiimeynta ayaa si tartiib tartiib ah loo sifeyn doonaa iyadoo loo horseedayo kobaca ganacsiga.
Otomaatiggu waa furaha
Qiimeeynta dhaqdhaqaaqa waa farsamo ka bilaabata maareynta nidaamka. In kasta oo tani ay tahay layli gacanta lagu qaban karo, kakanaanta iyo ballaadhinta arrimaha ku lugta leh ayaa ka dhigaya wax aan macquul ahayn. Bal qiyaas daqiiqad waxa ay la macno tahay inaad dib u eegis ku sameyso badeecad kasta oo ku jirta liiska mid kasta oo ka mid ah tartamayaashaada mid mid si aad uga soo saarto waxyaabaha u janjeeraya qiimeynta dukaankaaga. Ma ahan rafcaan.
Waa xilligan la hirgalinayo istiraatiijiyadda qiimeynta firfircoon ee teknoolojiyadda otomaatigga ay soo galayso, taasoo ka dhigaysa wax walba oo suurtagal ah. Waxay fulisaa ficilada lagu qeexay istiraatiijiyad ku saleysan doorsoomayaasha la siiyay lana falanqeeyay. Sidaa darteed, xaalad kasta, jawaab ayaa la siiyaa.
Xaqiiqda ah in hirgelinta qiimeynta firfircoon ay tahay, marka la soo koobo, ficil otomaatig ah macnaheedu waa inay jiraan wax badan keydinta kharashka aadanaha iyo waqtiga. Tani waxay u oggolaaneysaa maareeyayaasha eCommerce iyo falanqeeyayaasha inay xoogga saaraan howlaha heerka sare, sida barashada xogta, soo saarista gabagabada, iyo sameynta go'aamada ugu fiican ganacsiga.
30 Isgaarsiinta Isgaarsiinta Bulshada
38 Email Khaladaadka Suuqgeynta si aad u Hubiso Kahor intaadan Gujin dir